Muummicha barreessaaa tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guteres
Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guteres biyyoonni dureeyyii ta’an biyyoonni iyyeeyyii ta’an utuu hin argatin talaallii COVID-19 doosii miliyoonaan laka’amu ofii bitachuuf toora galanii ennaa jiran kanatti logiin talaallii kana ilaalchisee jiru dabalaa deemeera jedhan.
Robii kaleessaa dura taa’aa gamtaa Afriikaa Musaa Faakii Mahamat waliin gama viidiyoon geggeessaniin Guterees, baatii lama itti aanu keessa baatii itti aanu lama keessatti ijoollee biyyoota hiyyeeyyii keessaa tallaaluuf doolaara biliyoona 4.2 gaafataniiru.
Hoogganaan jaarmiyicha addunyaa akka jedhanitti malli tokkittiin talaalliin sun ardii Afriikaaf biyyoota ka biroof argamuun danda’amu maallaqi deggersaa kun yoo argame qofa.
Weerarri Vaayiresii Koronaa Haala Mirga Namaa Naannoo Addunyaatti Gufuu Ta’e: Antooniyoo Guteres
Addunyaan lammiiwwan isaaf hegeree gaarii arguu yoo fedhe tattaaffii duula vaayiresii koronaaf godhamu keessatti mirga namaa adda durummaan irrati fuuleffachuu akka qabu tokkummaan mootummootaa gaafatee jira.
Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guteres guyyaa mirga namaa addunyaa har’a yaadatamee oolu irratti haasaa dhageessisaniin weerarri COVI-19 gareelee akkaan saaxilamoo ta’an, hojjettoota eegumsa fayyaa, maanguddoota, lammiiwwan qaamaa hir’uu, dubartootaa fi durboota akkasumas sab xiqqaalee irraa dhiibbaa kaa’ee jira jedhan.
Vaayiresichi kan babal’ateef sababaa hiyyummaa, loogii, qabeenyaan uumama naannoo manca’uu akkasumas mirga namaa kabajamuu dhaabamuun badii guddaa hawaasa keessatti uume jedhan.
Komiishinerri dhimma mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa Michelle Bachelet gama isaaniin biyyoonni hedduun balaa uumuu vaayiresichaaf ilaalcha waan hin kennine akkasumas akka hin tamsaaneef tarkaanfii hatattamaa fudhachuu dhabuun naannoo addunyaa keessaa dinagdeen akka miidhamu mirgi siivilotaa fi siyaasaa akka hin kabajamneef sababaa ta’e jedhan.